माघे सक्रान्तिमा मासु र भातको जोहो गर्न मुखियासहित राउटे समुदाय रोल्पामा – रोल्पा समाचार
२०७६ पुष ९, बुधबार १६:०३ गते
रोल्पा समाचारदाता on २०७६ पुष ९, बुधबार १६:०३ गते
पुस ९ गते रोल्पा
रोल्पामा आएका नारायणबहादुर साही, विरखे शाही र मुखिया भद्रबहादुर शाही रोल्पा समचार साप्ताहिकका सम्पादक मानसिंह विश्वकर्मासँग कुराकानी गर्दै ।
नेपालका विकसित समुदायका मानिसहरुलाई अलिशान महल र सुख सयल र सुविधायुक्त जीवन जिउने सोचिरहेको बेलामा राउटे समुदायका मानिसहरु भने माघे सक्रान्तिमा मासु र भातको जोहो गर्नका लागि मुखियासहित २ जना राउटेहरु रोल्पामा आएका छन् । माघे सक्रान्ति वर्प नजिकै गर्दा उनीहरुलाई मिठो खानका लागि पैसाको अभाव भएपछि रोल्पा जिल्लामा आउन वाध्यता भएको बताएका छन् ।
रातभरीको हिडाई र अनिदो सहेर तीन जना रोल्पामा प्रायजसो देखिन मानिसभन्दा फरक मुद्राका मानिसहरु रोल्पाको बसपार्कमा झरे । उनीहरुलाई कसैले पनि शुरुमा हेर्दा थम्याउन कठिन भयो । तर पछि विस्तारै उनीहरुको भाषा, रहन, सहन, भेष भुषाले बल्ल राउटे समुदायका मानिसहरु नै होलान् भन्ने निश्चित भयो । चिसो मौसममा चिसोले काम्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र नगरपालिकाको कार्यालय सोधे । रोल्पामा बास बस्ने पैसा नभएको र रोल्पाबाट थोरैभएपनि पैसा संकलन गरी परिवारका खुशीयालीका लागि लजेर जानु पर्ने मनसायमा रहेकोले विहानै जिल्ला प्रशासन नकिजै गएका थिए । राउटे समुदायले माघे सक्रान्ति धुमधामसँग मनाउने गर्दछन् । धुमधामसँग मनाउने पर्वमा पनि मासु र भात लगायत केही मिठो खाने कुराको जोहो गर्नका लगि उनीहरुलाई निकै धौ–धौ भएको बताए । रोल्पामा बुधबार ४५ वर्षिय मुखिया भद्रबहादुर शाही, ४६ वर्षिय नारायण शाही र १५ वर्षिय विरखे शाहीको टोली रोल्पामा आएका थिए । मुखिया भद्रबहादुर शाहीले आफूहरुको ठूलो पर्व माघे सक्रान्तिमा मासु र भात खान अभाव भएपछि रोल्पा आउनु परेको बताउनुभयो । मुखियाँ शाहीले भन्नुभयो ः–“हामीले खसीको मासु, भात, सेल, तरुल खानका लागि आफूहको समुदायमा पैसाको अभाव भएपछि पैसा संकलनका लागि रोल्पा आएका हौँ, सिडियो, रोल्पा नगरपालिका हामीलाई खर्च दिनुभयो हाम्रो परिवारलाई एक छाक मिठो खान केही सहज हुन्छ ।” सबै किनेर खाने त हो नी हाल बन जंगलमा खानेकुराको अभाव हुन लागेको बताउनुभयो ।
राउटेहरुले बादरको सिकार गर्दछन् । अनि सबैभन्दा राम्रो मासु बादरको हुने बताउने राउटेहरुले आजकाल बादरको सिकार गर्न सरकारले नदिएको भन्दै आफूहरुलाई बादरको सिकार गरि खान दिएपछि सबैभन्दा राम्रो हुने मुखियाँ भद्रबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।
जंगलमा सामान्य छाप्रोमा बस्दै आएको बताउँदै चिसोमा आफूहरुलाई चिसोले सताएको बताउँदै लुगाको व्यवस्था नगरिएको सरकारले पनि नहरेको गुनासो रोल्पामा आएका नारायण शाहीले बताउनुभयो । बताउनुभयो । उहाँले चिसोमा कपडाको व्यवस्था नगर्दा आफूहरुले चिसोले मार्छ कि भन्ने डर रहेको नारायण शाहीले बताउनुभयो ।
“विद्यालय जान मन छैन” १४ वर्षिय विरखे शाही
१५ वर्षिय कलिलो उमेरका विरखे शाहीलाई भने विद्यालयप्रति कुनै पनि चासो छैन । आफूलाई जंगलको बसाई नै राम्रो भएको बताउँदै पढ्न आफूलाई कनै चासो नभएको बताउनुभयो । विरखले भन्नुभयो ः–“पढाई कुनै पनि चासो छैन, पढ्नु भन्दा आफूलाई फिरन्ते जीवननै सुख र खुशियाली छ । पढेर के हुन्छ ? ” सरकारले विद्यालयमा लगेर राखिदिएमा पनि नपढ्ने ? भन्ने रोल्पा समाचार साप्ताहिकको प्रश्नमा सरकारले जवरजस्ति लगे पनि आफू आफ्नै जीवन शैलीमा आएर जीवन विताउने बताउनुभयो । राज्यले दिइरहको भत्ता भने सहज रुपमा पाएको बताउनुभयो ।
मुखिया भद्रबहादुर शाही लगायतको टोलीलाई यसै गरी रोल्पा नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रमुख पूर्ण केसीको पहलमा नगद १५ हजार रुपैया प्रदान गरेको बताउनुभयो । कार्यालयबाटै व्यवस्था गरेर आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको नगरप्रमुख पूर्णकेसीले जानकारी गराउनुभयो । यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पा, जिल्ला समन्वय समिति रोल्पा लगायतले पनि सहयोग गरेको छ ।
रोल्पा जिल्लामा हतारका साथ सहयोग संकलन गर्ने मनसायमा रहेका भद्रबहादुर शाहीको समूहले भने जस्तो सहयोग नपाएपछि आफूलाई निकै खुशी लागेको बताएका छन् । सहयोग संकलन गरि सकेपछि नेपालगञ्ज फर्किने चिन्तामा रहेका मुखिया भद्रबहादुर शाहीको टोलीलाई जिल्ला ट्राफिक कार्यालय रोल्पाको सहयोगमा बसको व्यवस्था गरी पठाइ दिएका छन् । यातायात समितिसँग सहकार्य गरी बसमा सिटको व्यवस्था गरेपछि खुशी भएका टोलीले फेरी आगामी दिनमा पनि रोल्पा आउने बताए ।
विश्वमा कोही मानिसहरु विज्ञान र प्रविधिको युगमा प्रवेश गरी विश्वलाई आफ्नो नियन्त्रणमा कसरी राख्ने भन्ने विषयमा योजना बनाई रहेका छन् । नेपालमा कसैलाई कसरी पैसा खर्च गर्ने भन्ने चिन्ताले सताई रहेको बेला फिरन्ते जीवन विताइरहेका राउटे समुदायलाई भने वर्षमा एक पटक आउने माघ १ गते माघे सक्रान्ति मनाउन पनि यस्तो आर्थिक अभावको मार खेप्नु परेको छ । ति फिरन्त जीवनशैलीमा रमाउने समुदायलाई नेपाल सरकारको समृद्धिको नाराले कहिले समेत्न सक्छ ?